War Hada Ah:- Barlamaanka Sweden ayaa Ansixiyay Sharci Cusub oo Corona La Xiriira Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaWar Hada Ah:- Barlamaanka Sweden ayaa Ansixiyay Sharci Cusub oo Corona La Xiriira
January 8, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Barlamaanka Sweden waxyar ka hor ayey u codeeyeen in la ansixiyo sharciga ku meel gaarka ah ee Corona ee ay soo bandhigtay dowlada, si uu u dhaqan galo laga bilaabo 10 Janaayo, ilaa dhamaadka bisha Sebtember ee soo socota.
Sharcigu wuxuu siinayaa dowladda awood badan si looga hortago faafitaanka cudurka, maadaama ay awood u yeelan doonto, sida, in la xadido saacadaha shaqada ee dukaamada, matxafyada iyo goobaha jimicsiga, iyo in laga hortago booqashooyinka jardiinooyinka, xeebaha iyo meelaha kale ee bulshada si loo yareeyo ciriiriga. Waxay sidoo kale awood u yeelan doontaa inay xoojiso gebi ahaanba xiritaanka xarumaha dukaamaysiga, saldhigyada tareenka iyo gaadiidka dadweynaha.
Dawladdu waxay uga baahnayd sharcigan baarlamaanka sababtoo ah sharciga dalka Iswiidan ayaan u idmanayn inuu ku soo rogo tallaabooyin faro-gelin ah nolosha dadka, laakiin ka dib markii sharciga la ansixiyo, waxay u baahan tahay tallaabooyin adag oo deg deg ah.
Wasiirka arrimaha bulshada Lena Hallingrin Gunn ayaa muujisay sida ay ugu faraxsantahay ansixinta sharciga. “Sharcigu wuxuu oggol yahay suurtagalnimada in la xiro shirkadaha, laakiin tani maahan ujeeddadiisa ugu weyn, laakiin waa tallaabooyinka looga hortegayo faafitaanka infekshinka iyadoo aan lagu soo rogin xannibaadyo aan loo baahnayn waxyaabo kale oo aan gacan ka geysanaynin faafitaanka cudurka,” ayay tiri intii lagu guda jiray fadhigii doodda ee baarlamaanka. Tan waxaa lagu sameyn karaa, tusaale ahaan, iyadoo la xadidayo saacadaha shaqada iyo tirada booqdayaasha.
Kahor intaan la ansixin sharciga cusub, dowladdu waxay inta badan adeegsataa talooyin si dadka loogu qanciyo inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka. Waxay u adeegsatay Sharciga Amarka Dadweynaha iyo Sharciga Khamriga inay qaadaan tallaabooyin adag, laakiin awooddeeda sharci way xadidan tahay.
Sharcigan cusub ayaa Sweden ka dhigaya mid lamid ah wadamada kale, laakin suurta gal ma noqoneyso in wadanka lagu soo rogo gabi ahaanba xirida, bandow ama xayiraad dhanka socdaalka ah, sida ay sameeyeen dalal kale, Xoriyada dhaqdhaqaaqa waxaa dastuur ahaan lagu ilaaliyaa Sweden, iyo in la badalo xuquuqda dastuuriga lagu ilaaliyo, baarlamaanka Sweden waa inuu u codeeyaa Tani waxay ku dhici kartaa laba wareeg oo doorasho, taas oo macnaheedu yahay in arrintu ay adag tahay oo ay qaadato sannado badan.
Waa Maxay Sharciga Cusub Lasoco Goor Dhow